Xiriirka Isboortiga Isbaanishka: Asalka iyo Waxqabadyada | Fardaha Noti
Jenny monge | | Anshaxa
Maqaalka maanta waxaan uga hadli doonnaa Xiriirka Isboortiga ee Isbaanishka Boqortooyada, asalkiisa iyo asluubta iyo howlaha raacitaanka ee ay la shaqeeyaan.
Laakiin marka hore aan wax yar ka hadalno adduunka fardaha lagu xardho, sida la wada ogsoon yahay Farasku wuxuu qabtay jago muhiim ah oo ka dhex jirta aadanaha in kasta oo shaqooyinkiisu isbedelayeen sanadihii la soo dhaafay. Diyaar ma u tahay inaad wax yar ka ogaato?
1 Taariikhda fardaha fardaha
1.1 Waxyaabihii hore iyo bilowgii fuulitaanka faras ahaan ciyaar ahaan
2 Abuuritaanka Xiriirka Fardooleyda Isbaanishka Boqortooyada
3 Hawlaha ama anshaxyada la fuliyay
3.2 Shaqo fuushan faras
3.4 Tartan buuxa
3.5 Dharka Cowgirl
3.9 Caqabad boodid
3.11 Kubbadda cagta
4 Federaallada iskiis u shaqeysta
Taariikhda fardaha fardaha
Xawaaraha Equine-ka ayaa ka dhigtay inay si dhib ah ugaarsadaan nin reer miyi ah oo taariikh horey u soo maray, waxayna ku qasbanaadeen inay gaadaan gaadmo si ay u soo qabtaan una cunaan hilibkooda.
Mar dambe, markay dadnimadu degto oo bilaabay inuu ka shaqeeyo dhulka iyo xoolaha, wuxuu garwaaqsanayaa in farasku si fiican u noqon karo aalad shaqo oo aad waxtar u leh. Sidaas ayaa xayawaankani u noqday mid muhiim u ah aadanaha.
Fardo Waxaa loo adeegsaday xoolaha iyo shaqada beeraha, laakiin sidoo kale inuu dagaal sameeyo. Mid ka mid ah fardaha ugu caansan gudaha ciidamada fardooleyda ayaa noqon doona Bucephalus, oo uu qoray Alexander the Great. Shaqadan faras dagaal hal abuurka ah ee stapap Aad bay muhiim u ahayd.
Waxyaabihii hore iyo bilowgii fuulitaanka faras ahaan ciyaar ahaan
Qarniyadii dhexe, saraakiishii lagu tababaray Iskuulka Knights ama Isbaanish Chivalry waxay heleen sharaf weyn. Waqti ka dib Ciyaaraha fardaha iyo tartamada ayaa noqday mid aad u baahsan, fuulitaanka faraska wuxuu u muuqday isboorti. Madadaalada tartannadan ayaa sii socda in la sameeyo sida ka muuqata sawirka.
La Dugsigii ugu horreeyay ee fuulista ayaa ka soo ifbaxay Talyaaniga 1539. Qarniyaal badan, farsamooyin kala duwan ayaa ka soo baxay farshaxanka fuushan, sida muuqaalka aasaasiga ee ku tiirsanaanta marka farasku boodayo (farsamo la soo saaray 1902).
En 1921 waxaa la aasaasay Xiriirka Caalamiga ee Fardooleyda (FHI), ansixinta xeerarka tartamada caalamiga, Ciyaaraha Olombikada iyo asluubta kale ee ku saabsan faraska. FHI waxaa abuuray wakiilo ka socda sideed federaal qaran: Belgium, Denmark, France, Italy, Japan, Norway, Sweden iyo Mareykanka. Hadda waxaa jira 134 federaal oo xiriir la leh ilaa FHI.
Abuuritaanka Xiriirka Fardooleyda Isbaanishka Boqortooyada
Juun 22, Sannadkii 1901dii ayaa Bulshadii Isboortiga Isbaanishka laga aasaasay magaalada Madrid oo uu gudoomiye ka yahay Duke of Uceda. Dhacdadani waxay calaamad u ahayd bilowgii waxa noqon lahaa Xiriirka Isboortiga ee Isbaanishka. Meesha loo doortay in laga aasaaso naadigu waxay noqon lahayd oo ku yaal dalkii buuraha El Pardo, oo ah 64 hektar oo kordhin ah.
Bishii Janaayo 1908 codsigii naadiga. Boqor Alfonso XIII wuxuu siiyay darajada Royal, isu yeerista intaas ka dib "Bulshada Isboortiga Boqortooyada Isbaanishka ee Madrid".
Bilowgii 1936, naadiga dalka ayaa la aasaasay oo si aad u wanaagsan u shaqeynaya, in kastoo Dagaalkii Sokeeye wuxuu saameyn ku yeeshay horumarka nolosha naadiga iyo sidoo kale tas-hiilaadkiisa. Waxay qaadatay afar sano in mar labaad la dhiso xarumaha. Dhulku wuu saameeyay wuuna yaraaday maadaama qaarkood ay ka mid noqdeen Wasaaradda Beeraha. Waa run, hase yeeshe, in Wasaaradda lafteedu ay la soo maamushay Golaha Magaalada Madrid ee goosashada dhulka u dhow La Zarzuela.
Hawlaha ayaa dib loo bilaabay oo Bulshada Isboortiga Boqortooyada Isbaanishka iyo Naadiga Wadanka waxaa lagu daray qaynuunno cusub, Isugu yeeraya laga bilaabo xilligaas Isbahaysiga Boqortooyada Isboortiga Isbaanishka. Waxay ahayd xilligan, 1942, in dib-u-dhiska xarumaha ayaa la dalacsiiyay ee Xiriirka Fardooleyda Isbaanishka, laga bilaabo wakhti qurux badan taasi waxay socon doontaa ilaa 70s.
1983, xuquuqdii dhulalkii ay ku lahaayeen wadada weyn ee Castilla waa la damiyay, waxay bilaabeen raadinta dhulal cusub. Daaran 1990 beer ayaa laga iibsaday San Sebastián de los Reyes waxaana ka bilaabmay dhulalkaas sidii loo heli lahaa tas-hiilaadka cusub.
Naadigu wuxuu sii wadaa horumarkiisa goobahan tan iyo markii la furay 1997.
Hawlaha ama anshaxyada la fuliyay
Anshax ka kooban si loo tijaabiyo xawaaraha, awoodda iyo iska caabbinta jireed iyo maskaxeed ee faraska iyo fuulitaanka. Labaduba waa inay u safraan masaafo aad u kala fog oo kala duwan oo dhul kala geddisan ah, isla markaana ay u dhexeeyaan maalintii. Ruuxii fuushan waa inuu yaqaan sida loo cabiro dadaalka faraskiisu sameeyay. Dhamaadka tartanka, xayawaannada garaaca ayaa la cabiraa oo haddii ay ka sarreeyaan waxa la oggol yahay, fuulitaanka ayaa laga tirtirayaa baaritaanka
Shaqo fuushan faras
In ka badan edbinta, waa habka faraska iyo shaqada fuushanba, the tababarka ujeeddadiisu tahay kor u qaadista xirfadaha xayawaanku leeyahay iyo helitaanka xirfado cusub si ay ula shaqeeyaan lo'da berrinka. Waxaa jira tartamo qaran oo shaqo fardooley ah oo ka kooban horumarka afar baaritaan, shaqsi ahaan ama koox ahaan: Labbiska, La-dhaqaajinta, Xawaaraha iyo Fogaanta lo'da.
Tani waa mid ka mid ah anshaxyada Olombikada. Tani ku saleysan wada noolaanshaha u dhexeeya faraska iyo kan fuushan, sameynta dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dhib weyn leh lagu aasaasay barnaamij. Farduhu waxay u dhaqaaqaan dhinaca dambe, iskood isu rogaan, waxay ku fuliyaan marin ama Piaffe, wadada 20m x 60m, iyadoo ay kormeerayaan garsoorayaasha. In kasta oo dhaqdhaqaaqyada qaarkood ay dabiici u yihiin xayawaanka, waxay u baahan yihiin tababar ballaaran iyo u diyaargarow.
Tartan buuxa waa edbin taas kooxi dishibiliinnada labbiska, waxay ku tusaysaa boodboodka wadada iyo iskutallaabta.
Anshax marintan waxaa lagu fuliyaa in ka badan seddex maalmood had iyo jeer isla faras, kan ugu horreeya oo ka bilaabmaa labbis, kan labaadna tijaabo masaafo dheer ah iyo kan ugu dambeeya ee tijaabooyinka boodka ee wadada.
Labiska Cowgirl wuxuu ka kooban yahay sameynta taxane ah layliyo laga soo saaray kuwii lagu fuliyay shaqada lo'da. Layligani waxaa lagu sameeyaa afar geesood gudahood.
Asluubtani waxay ka timaaddaa tartanka wadista oo dhammaystiran, marka laga reebo in kiiskan loo adeegsaday gaari fardooley ama fandhaal laga jiido.
Waxaa jira saddex qaybood: geedo liin ah (hal faras), dogob (laba faras) iyo kan afraad (afar faras). Tartanka cuncunku wuxuu ka kooban yahay, sidii aan ku aragnay tartankii fuushanka oo dhameystiran, ee saddex tijaabo: Dharka giraanta 40m x 100m halka dib u eegis cayiman lagu sameeyo, lagu xukumo xeerbeegti qiimeysa dabacsanaanta, joogtaynta, toosnaanta, xiriirka, wadista, kulanka iyo soo gudbinta. Tijaabada labaad waa a Dilaa, tijaabo iska caabin ah iyada oo loo marayo koorso leh caqabado dabiici ah iyo kuwo dabiici ah, taas oo guuleystaha uu yahay midka dejiya waqtiga ugu fiican. Imtixaanka ugu dambeeya waa maaraynta, halkaas oo caqabado fudud oo kala duwan (sida kondho ama kubbado) ama carqalado badan la diyaariyo. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu qiimeeyaa in aan hoos loo dhigin caqabadaha la sheegay iyo shaabadda waqtiga uu tartame kasta sameeyo.
Waxqabadka leh foornada ayaa ku sii kordhayay Isbaanish dhowr sano, tani waxay ka dhigan tahay in kuwa yaryar ay fuuli karaan xayawaannada cabbirkoodu aad u habboon yahay. Hawsha ka socota fanaaniinta Waxay ka timaaddaa fuulitaanka aasaasiga ah ilaa boodka sare ama tartan buuxa.
Anshaxaani waa ciyaar fardooley ah, gudaha edbinta Monta Western, ee ay tahay inuu fuushan yahay faraska iyo farasku dhaqdhaqaaqyo taxane ah oo muujinaya xirfadda xayawaanka.Wadaha waa inuu feejignaan gaar ah siiyaa xawaaraha, shuruud looga dhigayo mid kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada, kaas oo lagu go'aaminayo qaab. Imtixaanadan marka la joogo farasku waa inuu had iyo jeer feejignaadaa una diyaar ahaadaa tilmaamaha fuushan. Dabeecadda, dabacsanaanta, ganaax, xawaaraha, awoodda iyo xawaaraha faraska waa la qiimeeyaa.
Anshaxu wuxuu isku dayaa inuu faras fuulo koorsada caqabadda ee lagu sameeyo baararka. Si sax ah u fulinta edbintan, dhammaan caqabadaha waa in la dhaafayaa iyada oo aan hoos loo dhigin mid ka mid ah baararka diyaarsan.
Koorsooyinka caqabadda waxaa lagu tartamayaa miisaanno kala duwan: tijaabinta waqtiga, ugaarsiga, awoodda ama tusaale ahaan saacadda-saacadda. Waxaa sidoo kale loo kala saaraa kooxo kala duwan iyadoo kuxiran meelaha dhaadheer, inta udhaxeysa 1,10 iyo 1,60.
Anshax marintaas, kartida fuushan ee waxqabadka safarro fardooley ah oo dhex maraya baadiyaha.
Kubbadda fardaha waa a ciyaar halkaas oo laba kooxood, oo ka kooban lix xubnood mid kasta oo ka mid ah uu saaran yahay faraska, ay is wajahayaan. Qaadashada kubad leh lix gacmood oo maqaar ah, waa inay helaan tirada ugu badan ee dambiiloodyada kooxda ka soo horjeedda. Tani waa in lagu sameeyaa faragelinta ugu yaraan seddex xubnood oo ka tirsan kooxda weerarka ciyaar kasta, iyagoo aruurinaya kubbadda iyagoon ka soo degin faraska.
Waa kan Labiska loo habeeyey, waxay ahayd edbinta curyaamiinta tan iyo 1996. Mabaadi'da guud waxay la mid yihiin labiska. Wadayaasha, si loo qiimeeyo saameynta naafonimada qof kasta, iyadoo la raacayo mabda'a kala duwanaanta, waa inay fuliyaan waxa loogu yeero "Kala-soocida Naafada ee Ciyaaraha". Tan waxaa loo sameeyay si tartanku u noqdo mid caddaalad ah intii suurtagal ah.
Anshax lagu qeexi karo inay tahay jimicsi faras fuushan. Faraska waxaa ku hagaya xarig darawal ah. Waa ciyaar isboorti iyo farshaxan heer sare ah oo ka mid ah kuwa ay aqoonsan tahay Xiriirka Caalamiga ah ee Fardooleyda.
Intaa waxaa dheer, dhammaan maadooyinkan, Xiriirka Isboortiga Isbaanishka wuxuu sidoo kale fuliyaa dalxiis fardooley ah.
Federaallada iskiis u shaqeysta
Waxaa jira federaallo madaxbannaan oo kala duwan sida: Isutagga Faraska Andalusiya ama Xiriirka Tartanka Faraska Aragonese. Marka hadaad rabto inaad balaadhiso macluumaadka laxiriira deegaankaaga juqraafi ahaan, waxaan kugula talineynaa inaad la tashato websaydhka gaarka ah ee isutaga ismaamulkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Anshaxa » Xiriirka Isboortiga Isbaanishka: Asalka iyo Waxqabadyada